Misy ny fifanarahana iraisampirenena matanjaka fa miaina ny fiovaovan'ny toetr'andro izao tontolo izao, mihamitombo ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro, ary ny ankamaroan'ny fanovana dia vokatry ny asa ataon'ny olombelona.
Ny fiantraikany amin'ny fandefasana entona mandatsa-dranomaso isan-karazany amin'ny asa aman-draharaha ataon'olombelona (toy ny famonoana gazy fôsily ho an'ny hafanana sy ny angovo, ny fandripahana ala, famokarana vokatra, fanondranana biby fiompy, ary famokarana vokatra indostrialy) dia tena manimba ny tontolo iaianan'ny vatohara.
Noho ny fikorontanan'ny toetr'andro sy ny fiovaovan'ny ranomasina, anisan'izany ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina, ny fitrandrahana ny harena dia tokony hampitombo ny faharetan'ny ho avy. Kitiho raha hanitarana. © WRI (World Resources Institute)
Ny tontolo voajanaharin'ny vatohara dia atahorana ihany koa ny fitambaran'ny hafa, indrindra ny fandrosoana, ny fandrosoana amoron-dranomasina, ny fandotoana ary ny aretina. Tato anatin'ny folo taona farany, ny fiovaovan'ny toetr'andro, miaraka amin'ny fandrahonana any an-toerana, dia nitarika ny fihenan-dàlana goavana amin'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina manerantany.
Fiarovana ny fikorontanan'ny toetrandro
Fanamafisana ny fiovaovan'ny toetr'andro:
Mitombo ny mari-pahaizan'ny ranomasina dia nambara mialoha mba hampitombo ny faharetan'ny haintany sy ny haintany amin'ny hain-trano mivalona amin'ny hariva mandritra ny folo taona ho avy. Coral disease Ankoatra izany, ny tohatra dia mialoha ny hampitombo ny valin'ny fampiroboroboana ny ranomasina.
Mitsangàna ambony ranomasina
Rising seas ny fifandraisana amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia mety tsy mampidi-doza lehibe amin'ny haran-dranomasina, raha toa miakatra tsikelikely ny ranomasina mba hampitombo ny haavo. Na izany aza dia mety hisy fiantraikany goavana ny haran-dranomasina raha toa ka mitombo ny fisondrotan'ny ranomasina eny amin'ny ranomasina. Ankoatr'izany, ny fiakaran'ny ranomasina dia mety miteraka fitomboan'ny fitomboan'ny ala noho ny fiparitahan'ny moron-dranomasina, izay mety hanimba ny haran-dranomasina. Mety hahatonga ny fiparitahan'ny ranomasina sy ny morontsiraka any amin'ny nosy ambany sy ny toeram-ponenana amoron-dranomasina toy ny ala honko sy sokatra amoron-dranomasina. Ny fahafahan'ireo vatohara hanohy ny fiakaran'ny ranomasina dia mifamatotra mafy amin'ny fanamafisana ny ranomasina (etsy ambany).
Mety hiova ny fiovaovan'ny toetr'andro Fiovan'ny toetr'andro. Ireo projections amin'ny ho avy mifototra amin'ny modely avo lenta dia manoro hevitra fa amin'ny 2100:
Mety ho mahery vaika ny oram-baratra manerantany
Ny fatran'ny oram-baratra mahery vaika dia mety mitombo indraindray any amin'ny faritra sasany
Ny isan'ny oram-baratra rehetra eran-tany dia mety hihena na hiova kely
Ny oram-baratra tropikaly dia mety hiteraka fahasimbana goavana eo amin'ny tontolo iainana ara-vatoharan-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanimbana mivantana ny rafitry ny vatohara ary mety miteraka fitomboan'ny fandotoana sy fanodinana amin'ny tany.
Nihorohoro ny Ranomasina Oceanic
Ny ranomasimbe dia mampihetsi-po ny hafanana manerana ny planeta amin'ny alàlan'ny tondra-drano manerantany (ohatra, amin'ny alàlan'ny tohatra, ny fialamboly ary ny thermohaline). Ny tondra-drano an-dranomasina dia voakasika amin'ny fiovan'ny rivotra, ny fisintonana, ny hafanana ary ny salinity noho ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fiovan'ny tondra-drano any amin'ny ranomasina dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitaterana na ny fihazonana ny loto, ny fivoaran'ny lavanila, ary ny fitondram-panjakana izay mety hisy fiantraikany amin'ny karazam-biby mahasalama toy ny vatohara. Ny modelim-pahaizana momba ny toetrandro maro dia manambara fa ny fihenan'ny fihodinana ny thermohalinina vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fiovan'ny haavo sy ny toetr'andro.
Ny fanamarihana dia manondro fa ny fiovana dia mitranga amin'ny habetsahana, hery, fihenam-bidy ary karazana rotsak'orana. Ny endriky ny toetr'andro dia mampiseho fihodirana voajanahary lehibe noho ny El Niño ary ny fiovan'ny tandindon'ny fihazakazahan'ny atmosfera toy ny Oscillation Avaratra Avaratra. Ny fironana maharitra nandritra ny taon-jato farany dia mampiseho ny toe-pahasalamana mivaingana any atsinanana sy atsimon'i Amerika, avaratra atsinanan'i Eoropa ary avaratra sy afovoany, fa maina ao amin'ny Sahel, atsimon'i Afrika, ny Mediterane ary Azia atsimo. Ny fitomboan'ny vovo-drano any amin'ny toetrandro mafana dia miteraka fisehoan-javatra misimisy kokoa noho ny fisalasalana ary mety hitera-doza ny haintany (izay tsy misy orana) ary ny tondra-drano (any ny orana). Ny fiovan'ny zava-mitranga ao El Niño dia misy fiantraikany amin'ny fizarana sy fandaharam-potoan'ny tondradrano sy ny haintany, indrindra any amin'ny tropika ary manerana ny latabatry ny firenena Pasifika.
Ozinina fanasitranana: vokatry ny fiakaran'ny CO2, Fa tsy fiovan'ny toetrandro
Mitombo ny gazy karbonika atmosfera (CO2) mitombo ny fiakaran'ny CO2 fanangonam-bozaka eny ambony ranomasina, mampihena ny pH ny ranomasina (mahatonga ny ranomasina kokoa ho asidra). Ny fiverimberenan'ny ranomasimbe dia mampihena ny habetsahan'ny karôzôma kalazo izay ahafahana manamboatra ny vatoharan-dranomasina sy ireo karazana marika hafa mba hananganana ny taolam-paty sy kirany. Ity dingana ity dia antsoina ranomaso ary mampihena ny fahafahan'ny haran-dranomasina hitombo sy hanoherana ny fihenjanana.
Ny fanamafisana ny ranomasina dia vokatry ny CO2 fanondranana, fa tsy fiovaovan'ny toetr'andro. Fiovan'ny toetrandro any amin'ny ranomasina noho ny atmosfera CO2 Ny fandefasana entona dia azo jerena ankehitriny ary tena azo fantarina. Ny fanehoan-kevitra momba ny simika mitarika ny fanamafisana ny ranomasina (fananganana asidra karbonika rehefa CO2 mamafa ny ranomasina) dia tsy miankina amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ka tsy manamaivana ny fanamafisana ny ranomasina ny fihetsiketsehana toy ny geoengineering ho an'ny hafanana manerantany maneran-tany sy ny famerenana ny grenady hafa. Noho izany, ny hany fomba hampihenana ny fanamafisana ny ranomasina amin'ny ankapobeny dia ny fampihenana ny CO2 fitomboan'ny atmosfera.
Fiovana voajanahary ao amin'ny Oseana-Atmosfera System
Ankoatra ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fizika voajanahary dia miara-miasa amin'ny fitondrana fiovana eo amin'ny rafi-pananan'ny ranomasina. Ohatra, ny El Niño Southern Oscillation (ENSO) dia manondro fizarana roa farafahakeliny amin'ny vanim-potoanan'ny rivotra voajanahary (El Niño sy La Niña). Ny ENSO no iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro mandritra ny vanim-potoana isan-taona, ary mitarika amin'ny fiakaran'ny hafanana any amin'ny Oseana Pasifika atsinanana. Ny mpahay siansa dia tsy azony antoka raha hisy fiantraikany eo amin'ny faharetan'ny orinasa ENSO amin'ny taona 21 ny fiovaovan'ny toetrandro, saingy ny fanadihadiana dia manolo-kevitra fa ny ENSO dia afaka mampitombo ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro, indrindra ho an'ny ecosystems momba ny haran-dranomasina sy ny fokonolona miankina amin'izy ireo.
Ny fiantraikany amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina
Ny fiovan'ny fikorontanan'ny toetrandro dia mety hampitombo ny fitondrana korontana amin'ny haran-dranomasina, ary ny tanjon'ny fitrandrahana harena an-dranomasina dia hivoatra hatrany amin'ny mety ho fanarenana sy fikolokoloana maharitra ny rafitra, ny asa ary ny asa sy ny tolotra - izany hoe ny faharetany. Ny fitantanana vonjimaika dia mitaky ny tanjon'ny fitantanana ho an'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina dia ny fampidirana ireo fanjakana ekosy (ohatra ny harena an-dranomasina, ny dity hazandrano) sy ny fizotran'ny ecosystem (ohatra: ny fahombiazan'ny mpanafaka, ny fanesorana algal). Tena zava-dehibe ho an'ny mpitantana izany Mandrindra ny ezaka eo amin'ny fitantanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fihazonana azy ny haran-dranomasina. Raha miatrika ny fiovan'ny toetr'andro, ny fitantanana fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanamafisana dia mety hanome ny fanantenana tsara indrindra ho an'ny tontolo iainana an-dranomasina. Mandritra izany fotoana izany, ny mpitantsoratry ny vatohara dia mila miantso ny fihenan'ny CO atmosfera2 pahaizana, raha toa ka tsy ampy ny faharetana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina.
Lahatsary: ​​Manova Fotoana (1: 00)
Andrew Baker dia miresaka momba ny ilana hanamboatra ny vatohara hividianana fotoana rehefa miaina ny fiovan'ny toetr'andro.
Video: Fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro (16: 47)
Dr. Ove Hoegh-Guldberg dia miresaka momba ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFANTATRO FAHATSIAROVANA: Boky Torolàlana ho an'ny Fampandrosoana sy ny Fahavitrihana amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny rafitra natiora
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoClimate Institute
Coral reefs sy ny fiovan'ny toetr'andromanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy harafesin'ny haran-dranomasina sy ny fanoherana ny fanoloanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMitantana ny ala honko amin'ny fahantrana amin'ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMitondra ahitra ho an'ny faharetan'ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampahalalana momba ny fikorontanan'ny toetrandro / Fifanarahan'ny Framework UN momba ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiovan'ny fikorontanan'ny toetrandro sy nosy Pasifika: Ny tatitra sy ny fiantraikany amin'ny tatitra momba ny fanadihadiana ny klioba any amin'ny nosy 2012 Pacificmanokatra fisie PDF